Eny, takianay ny kaomandy iraisam-pirenena rehetra mba hanana fatra farafahakeliny. Raha mijery habe kely kokoa ianao dia mamporisika anao hifandray aminay.
Eny, afaka manome antontan-taratasy betsaka indrindra izahay, anisan'izany ny Certificat de analysis / Conformance; Fiantohana; Fiandohana, ary antontan-taratasy fanondranana hafa izay nitaky.
Ho an'ny santionany dia 7 andro eo ho eo ny fotoana itarihana. Ho an'ny famokarana betsaka, ny fotoana itarihana dia 7-21 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Ny fotoana itarihana dia nanjary nahomby rehefa (1) nahazo ny petra-bolanao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay, azafady mba andefaso ny takiana amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Azonao atao ny mandoa ny fandoavam-bola amin'ny kaontinay amin'ny banky T / T, fametrahana 30% mialoha, fifandanjana 70% amin'ny kopian'ny B / L, na L / C amin'ny fahitana.